IBezzia yiwebhusayithi eyingxenye yeqembu elikhulu le-Inthanethi le-AB. Ikhasi lethu linikezelwe kowesifazane wanamuhla, owesifazane ozimele, osebenza kanzima onenkinga. Inhloso yeBezzia ukwenza kutholakale kumfundi izindaba zakamuva kwezemfashini, ubuhle, ezempilo kanye nokubeletha, phakathi kwabanye.
Abahleli beqembu lethu bakhethekile ezindaweni ezifana ne-psychology, pedagogy, fashion kanye nobuhle noma impilo. Ngaphandle kwamagatsha abo ahlukile, bonke babelana ngenhloso efanayo, uthando lokuxhumana. Ngenxa yethimba lokuhlela iBezzia, eminyakeni yamuva iwebhusayithi yethu ibilokhu ifinyelela abafundi abaningi ngokwengeziwe. Ukuzibophezela kwethu ukuqhubeka nokukhula nokunikeza okuqukethwe okuhle kakhulu.
El Ithimba lokuhlela iBezzia Yenziwe ngabahleli abalandelayo:
Uma ufuna futhi ukuba yingxenye yethimba lokubhala le-Bezzia noma amanye amawebhusayithi wethu ahloselwe izethameli zabesifazane, gcwalisa leli fomu.
Umbhali, umhumushi, i-blogger nomama. Ngazalelwa eBarcelona eminyakeni engamashumi amathathu edlule, isikhathi eside ngokwanele ukuba ngibe umlutha wobuciko, imfashini, umculo nezincwadi. Unelukuluku futhi ubudedengu ngokwemvelo, qaphela njalo ukuthi ungaphuthelwa noma yini impilo esinikeza yona!
Njengoba ngangimncane ngangicacelwa ukuthi into yami kwakuwukuba nguthisha. Ngakho-ke, ngineziqu ze-English Philology. Okungahlanganiswa ngokuphelele nentshisekelo yami yemfashini, ubuhle noma izindaba zamanje. Uma sengeza umculo omncane we-rock kukho konke lokhu, sesivele sinemenyu ephelele.
Ngineminyaka engamashumi amathathu ubudala futhi nginezifundo ezithile ezinikezelwe emhlabeni wobunjiniyela, kunezifiso eziningi ezithatha isikhathi sami. Ngibe nethuba lokufunda enye yazo, umculo; Ngokuqondene nowesibili, ukupheka, ngiyazifundisa. Selokhu ngasebenza njengesidunu sikamama, ngiyakhumbula ngijabulela le ndlela yokuzilibazisa engingabelana ngayo nawe manje ngenxa ye-Actualidad Blog. Ngikwenza kusuka eBilbao; Bengihlala lapha njalo, yize ngizama ukuvakashela zonke izindawo okungenzeka ukuthi ngithwale ubhaka ehlombe lami.
Umama, uthisha wezemfundo ekhethekile, i-psychopedagogue futhi enothando lokubhala nokuxhumana. Umlandeli wokuhlobisa nokunambitheka okuhle, ngihlala ngifunda ngokuqhubekayo ... ngenza ukuthanda kwami ​​nokuzilibazisa kube ngumsebenzi wami. Ungavakashela i- iwebhusayithi yomuntu siqu ukwazi konke.
Ngifuna inguqulo yami engcono kakhulu, ngithole ukuthi isihluthulelo sempilo enempilo ibhalansi. Ikakhulukazi lapho ngiba ngumama futhi kwadingeka ngivuselele kabusha indlela yami yokuphila. Ukuqina njengomqondo wempilo, ukuzivumelanisa nezimo nokufunda yikho okungisiza nsuku zonke ukuzizwa ngingcono esikhunjeni sami. Ngiyazifela ngakho konke okwenziwe ngezandla, imfashini nobuhle kuhamba nami osukwini lwami nosuku. Ukubhala kuyisifiso sami futhi iminyaka ethile, umsebenzi wami. Joyina nami futhi ngizokusiza uthole ibhalansi yakho ukuze ujabulele impilo ephelele nenempilo.
Ngithweswe iziqu kwezokukhangisa, engikuthanda kakhulu ukubhala. Ngaphezu kwalokho, ngikhangwa yikho konke okuthokozisayo nobuhle, yingakho ngingumlandeli wamaqhinga okuhlobisa, imfashini nobuhle. Ngihlinzeka ngamathiphu nemibono yokubenza babe wusizo kwabanye abantu.
Isitshudeni se-Psychology, ukuqapha kwezemfundo kanye nokuzilibazisa okuningi. Enye yezinto engizithandayo ukubhala futhi enye ukubuka amavidiyo nokufunda yonke into ephathelene nobuhle, izimonyo, izitayela, izimonyo, njll. Ngakho-ke le ndawo iphelele ngoba ngikwazi ukukhipha engikuthandayo ngiphinde ngizihlanganise zombili izinto zokuzilibazisa. Ngiyethemba ukuthi ngingabelana nawe engikwaziyo ngale ndaba nokuthi nawe uzongisiza ngiqhubeke nokufunda ngalesi sihloko ngamazwana akho. Siyabonga ngokufunda iBezzia.
Isazi ekuxhumaneni nomphakathi naku-Intanethi nakwimfashini. Ngithanda ukuhambisana nezindaba zakamuva namathiphu ngobuhle besifazane. Uma ufuna ukukhazimula, unganqikazi bese ungilandela!
I-Blogger, umklami, umphathi womphakathi ... engaphumuli futhi enezintshisekelo eziningi ezingiletha ekhanda lami. Ngiyayithanda imfashini, i-cinema, umculo ... nakho konke okuphathelene nezindaba nezitayela zamanje. IGalician kuzo zonke izinhlangothi ezine, ngihlala ePontevedra yize ngizama ukunyakaza ngangokunokwenzeka. Ngiyaqhubeka ngifunda futhi ngifunde nsuku zonke, futhi ngiyethemba ukuthi lesi sigaba esisha sinomvuzo.
Ngiyisazi sokusebenza kwengqondo nomlobi, ngithanda ukuxuba ulwazi nobuciko namathuba amaningi omcabango. Njengomuntu, nami ngithanda ukuzizwa kahle ngami, ngakho-ke lapha ngizokunikeza amathiphu amaningi ukuze ube muhle futhi ngasikhathi sinye ube muhle.
Ngazalelwa eMalaga, lapho ngakhulela khona futhi ngafunda khona, kodwa manje ngihlala eValencia. Ngingumdwebi wemidwebo ngokomsebenzi, yize ukuthanda kwami ​​ukupheka okulula nokunempilo kungiholele ekuzinikeleni kwezinye izinto. Ukudla okungekuhle ebusheni bami, kwaholela ekutheni ngibe nentshisekelo ekhishini elinempilo. Kusukela lapho, ngaqala ukubhala izindlela zami zokupheka kubhulogi lami elithi "The Monster of Recipes", elisaphila kakhulu kunakuqala. Manje senginethuba lokuqhubeka nokuhlanganyela izindlela zokupheka ezithokozisayo kwamanye amabhulogi ngenxa ye-Actualidad Blog.
Sawubona! NginguMarta, isazi sezenhlalo futhi ngiyazithanda izingane. Ngenza amavidiyo ngamathoyizi athandwa kakhulu abancane endlini. Ngaphezu kokujatshuliswa yibo, bazokwazi ukuthola ulwazi oluzobasiza kwinqubo yabo yezemfundo nenhlalakahle, bafunde ukuhlobana nomndeni wabo kanye nemvelo yabo ngendlela enempilo nejabulisayo.
Intombazane yakwaGeek inothando ngochungechunge, izincwadi namakati. Umlutha wetiye. Ngingowesifazane wasePoland waseSpain othanda imfashini futhi ngicabanga ukuthi ngingaletha umbono omusha ngakho. Ukutholakala kwethu kalula kusenza sihluke futhi kufanele sisebenzise amathuba abo, ubuntu bethu buyisihluthulelo sempumelelo nenjabulo yethu.
Carmen Espigares isibambi sendawo image
Isazi sokusebenza kwengqondo, uchwepheshe we-HR nomphathi womphakathi. UGranaína wayo yonke impilo nomfunayo wezinjongo ongazifeza. Ezinye zezinto engizithandayo? Cula eshaweni, ufilosofi nabangane bami ubone izindawo ezintsha. Umfundi okhuthele uhlala ekulungele ukubhekana nezinselelo ezintsha ngokumomotheka okutshalwe ebusweni bakhe. Ukuhamba, ukubhala nokufunda kuyizifiso zami ezinhle. Ekuqeqeshweni okuqhubekayo nasekufundiseni impilo, ngoba ... futhi yini lokho abakubiza ngokuthi kuyaphila uma singakutholi konke okusinikeza kona ...?
Imisebenzi yezandla, ubuciko, ukuvuselelwa kabusha kwezipho, izipho zoqobo, umhlobiso, imikhosi ... YONKE ISIPHANDI.